Maamulka gobolka Banaadir oo mar kale u jawaabay golaha midowga murashaxiinta madaxwaynaha | XORRIYA NEWS
Home Siyaasadda Maamulka gobolka Banaadir oo mar kale u jawaabay golaha midowga murashaxiinta madaxwaynaha
Maamulka Gobolka Banaadir ayaa markale ka jawaabay war qoraal ah oo kasoo baxay Murashaxiinta utaagan xilka Madaxwaynaha Soomaliya.
Qoraal dheer oo kasoo baxay Maamulka Gobolka ayaa waxaa lagu sheegay inay aad ugu xukun yihiin Qoraalkii Jimcihii kasoo baxay Musharaxiinta Madaxweynaha oo eedeyn Culus loogu jeediyay Madaxda Qaranka iyo Guddoomiye Cumar Finish.
Maamulka Gobolka ayaa Qoraalkii Musharaxiinta ku tilmaamay inuu ahaa mid laga leeyahay danno siyaasadeed, isla markaana loogu adeegayo dalal shisheeye, sidoo kalena eeda loo jeediyay Madaxda aanay sal iyo raad toona laheyn.
Sidoo kale Maamulka Gobolka ayaa hoggaanka Bulshada rayidka Soomaaliyeed, aqoonyahanada, siyaasiyiinta iyo qeybaha kala duwan ee Bulshada ugu baaqay inay si wadajir ugu midooban nabadda iyo horumarka ka jira Caasimadda dalka ee Muqdisho.
“Maamulka Gobolka Banaadir waxaa uu mar kale ka digayaa hab-dhan kasta (Hadal iyo Ficil) ee dhiiragelinaya dib u dhac iyop xasilooni darro taasoo keeni karta natiijo aan la mahdin, mana oggolaanayo Maamulka Gobolka marnaba inay taasi dhacdo” ayuu yiri Qoraalka kasoo baxay Mamaulka.
Si kastaba Qoraalkaan ayaa kusoo aadayaa, iyadoo Musharaxiinta Madaxweynaha ay sheegeen in Madaxweyne Farmaajo uu qaadan doono Mas’uuliyada iyo Natiijada ka dhalata ficilada ay ku howlan tahay Xukuumadda Ra’iisul Wasaare Rooble, sidoo kalena eedeyn Culus loogu jeediyay Guddoomiye Cumar Maxamuud Maxamed Finish oo munaatiqiin ku tilmaamay Musharaxiinta.